NAAR AFUUF MULKIILAHA HCTV OO NOQDAY ALQUSHAASH - Cakaara News
NAAR AFUUF MULKIILAHA HCTV OO NOQDAY ALQUSHAASH
Jigjiga ( Cakaaranews ) Khamiis, 16ka June 2016. Mulkiilaha telefishinka Horn Cable Farxaan Xaaji Cali Axmed oo kamid ah dadka tirada yar ee ay dhakhaatiirta caalamku u qoreen inuu had iyo jeer dhagaha gashado muusiga shucaaca leh ayaa sheer kulajira hogaaminta kooxaha argagixisada ah sida alshabaab (alqushaash), daacish, UBBO, alqaacida, boko-xaaraam iwm. Wuxuuna TVgiisa u isticmaalaa qaaciidada ah ‘‘farihii dufan leh baa wax duuga’’ taas oo cadayn u ah in uu lacagta ugu badan ee TVga uu kahelo ururada argagixisada ah si uu ugu meelmariyo mabaadiidooda. Isagoo ay ciidamada RRUda somaliland ee ladagaalanta argagixisada ay hada kahor habeen badh udhaceen gurigiisa kalana wareegeen kadib markii ay xaqiijiyeen in uu xidhiidh toos ah laleeyahay hogaaminta sare ee ururada argagixisada ah.
Dhanka kale tafatirihii guud ee Horn Cable TV mudane Cllaahi Aadan Cumar (wayab) ayaa xilkii uu kahayay TVga iskacasilay kadib markuu u adkaysan waayay dhaqan xumada mulkiilaha oo ay kamid tahay cadiifad qabiil, tabinta buunbuuninta wararka aan sal iyo raad toona lahayn ee iskahorkeenaya qabiilada soomaaliyeed ee walaalaha ah iyo waliba baahinta wararka iskahorkeenaya xisbiyada kaladuwan ee somaliland.
Waxaa intaa dheer oo uu mulkiilaha Horn Cable TV kucaanbaxay kaganacsiga iyo xaalad abuurka beenta ah ee kuwajahan xasilooni darida kataagan soomaaliya islamarkaana wuxuu aaminsan yahay in xasilooni iyo nabad kadhalata soomaaliya ay lid kutahay ganacsigiisa taas oo kadhigan in hadii soomaaliya nabad kadhalato uu soo afjarmayo qandaraaskii uu kulajiray ururada argagixisada ah.
Hadaba mulkiilaha Horn cable TV ayaa kusifoobay dhaqan xumo kadhan ah Diinta Islaamka oo ay kamid tahay tumashada, fasahaadinta dumarka isagoo kaameero kaduubanaya, isticmaalka balwadaha xaaraanta ah sida kumaydhashada khamriga iyo waliba kukhamaarka nafta biniaadamka. Wuxuuna iskadhigaa nin da'yar isagoo cimri dartii ay tintu lacadaatay oo hadana isticmaala kareemada jidhka soo celiyo iyo madoobayso isaga oo ay ujeedadiisu tahay ‘‘yaan lagaa garanin da’da’’.
Maxa sabab u ahaa dhacdadii kadhacday gaashaamo ?
Waxaa sabab u ahaa dhacdadii gaashaamo ina afdiinle, xawaalada dahabshiil iyo mulkiilaha HCTV madaamo oo ay ahaayeen mulkiilayaasha gawaadhidii kontorobanka ahayd ee uu dagaalku ka dhacay. waxaa intaa dheer oo soo baxday in mulkiilaha HCTV oo horay ooga shaqaysan jiray kontorobaanka isagoo markasta adeegsan jiray dad ay ehel yihiin oo intooda badan xogtooda gacanta lagu hayo. Hadaba si uu uga hortago arimahaas iyo kuwa kale ayaa waxaa uu bilaabay qorshe qiiq isku qarin ah oo uu rabo sidii uu shaqooyinka kontorobanka ah uu qabiil ugu qarin lahaa balse waxaan u sheegaynaa Farxaan Xaaji in isaga iyo alshaab toona aysan waxba u tari karin kontorobandistayaal iyo dad sharci daro kusocda oo ay arintani tahay mid lagula xisaabtami doono
Waxaa wax aad loola yaabo ah in ina afdiinleoo horay hanti badan si sharci darro ah uga dhacay dawlada itoobiya gaar ahaan canshuurta dalka walina ay hantidaasi ku maqan tahy uu bilaabay in uu si sharci daro ah dib ugu soo celiyo jaadka liiga ah magaalada gaashaamo taas oo ah arinta sababta u ahayd dhacdadii gaashaamo.
Waxaase intaa kasii daran xawaalada dahabshiil oo ahayd xawaalad ganacsi ah oo udhaxaysay dadka balse lasheegayo inay wado waxyaabo dhib ku ah amniga geeska afrika. Waana arinta dad badani ay is waydiinayaan .
Ugudanbayna waxaanu u cadaynaynaa cid kasta oo iskudayda inay si sharci darro ah wax kuraadiso inaysan marnaba u suurtagalaynin.